ညီလင်းသစ်: နှစ်သက်မိရာ တနေ့တာ
Posted by ညီလင်းသစ် au 6.4.11
သူများကြိုက်တာတွေ လာဖတ်ရတာ ကြိုက်တယ် :P
"မှန်ပြတင်းနားမှာ ထိုင်၊ ကော်ရစ်ဒါက လမ်းသွားလမ်းလာတွေကို ငေး၊ တွေးချင်ရာတွေးပြီး ထမင်းစားရတာ ကြိုက်တယ်" တူသွားပြီ။ မှန်နားမှာထုိုင်ပြီးလမ်းသွားလမ်းလာတွေငေးပြီးစားရတာကျမလည်းကြိုက်တယ်။
"တစ်ယောက်ထဲ စားတဲ့အခါ မှန်ပြတင်းနားမှာ ထိုင်၊ ကော်ရစ်ဒါက လမ်းသွားလမ်းလာတွေကို ငေး၊ တွေးချင်ရာတွေးပြီး ထမင်းစားရတာ ကြိုက်တယ်၊" I love that too!!
တနေ့တနေ့ အချိန်လုပြီး ဘလော့နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ကွန်မန့်အနေနဲ့ ကိုယ်ရေးချင်ရာရေးရတာကို ကြိုက်တယ် .. တီရှပ်နဲ့ဂျင်းဘောင်းဘီ ၀တ်ရတာကို ကြိုက်တာချင်း တူတယ် ...
ဘယ်လို lifestyle ပဲဖြစ်ဖြစ် နေတတ်ရင်ကျေနပ်စရာချည်းပါပဲဗျာ..
နေ့စဉ်အကြိုက်တွေနဲ့ ဘ၀တစ်ခုကို မျှဝေပေးလို့ ဒီပို့စ်လေးလည်းကြိုက်ပါတယ်။
ပြင်သစ်အီဒီယမ်ထဲက စကားလုံးလေးတစ်လုံး ကို ကြည့်ပြီး ဒီကမြေအောက်ရထားလိုင်းနံမည်ကို တောင် သတိရမိတယ်။
“ တိုကျို မက်ထရို ”တဲ့။
အဲဒီလို ရိုးရှင်းတဲ့ နေ့ စဉ်ဘဝပုံစံလေးကို ကြိုက်တယ် :)
ကိုညီလင်းသစ်လို ဘ၀မျိုးလေးကို ကြိုက်တယ်.. :)
မမဘေဘီပြောသလိုပဲ သူများကြိုက်တာ ဖတ်ရတာလေး ကြိုက်တယ် :P...
မကြိုက်တာ မရှိတာလဲ ကောင်းတာပါပဲဗျာ
ညကိုးနာရီမထိုးခင်သားအိပ်ပျော်သွားလေ့ရှိတဲ့ညတွေကိုကြိုက်တယ်... :D... ကျမလဲခလေးတွေ စောစောအိပ်တာကြိုက်တယ်... သူတို့အိပ်မှ ကွန်ပျူတာရှေ့ကောင်းကောင်းထိုင်ရတာ...
ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့ ဘလော့ဂ်တွေကိုမြည်းရတာကြိုက်တယ် ဆိုတဲ့စကားကိုကြိုက်တယ်..
ဟားဟား ဘလော်ဂ့်တွေက အမြည်းဖြစ်မှန်းခုမှ သိတော့တယ်.. တော်ပါသေးရဲ့ အရက်နဲ့ မမြည်းလို့း)
ပေါ့ပါးလွတ်လပ်တဲ့ အကြိုက်လေးတွေကို သဘောတကျနဲ့ ဖတ်သွားပါတယ်..
ရိုးရိုးလေးရေးသွားတာကို ဖတ်ရတာ ကြိုက်ပါတယ်
အမလည်း ဒီနိုင်ငံကိုရောက်လာပြီး စက်ရုပ်လို ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့ ဘ၀ကို ကြိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြားတခု ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဟားဟား သဘောကျတယ်...ဟုတ်တယ် အဲလိုမှ မိသားစုနဲ့ ကွာလတီတိုင်းမ်ကလေးတွေ ရနိူင်မယ်လေနော့....
အမလည်း အဲလိုပဲ ကိုယ်စားချင်တာ သူ့အဖော်စပ်ရတာ အရင်ပဲ...တရားခံရှာတာ ဆိုပါတော့...ဟဟဟ :P
သူများကြိုက်တာတွေ လာဖတ်ပြီး ကြိုက်ကြောင်း ရေးသွားတဲ့ ကွန်မန့်ကိုလည်း ကြိုက်တယ်...၊း)
21 grams ဇတ်ကားထဲမှာ (ထင်တယ်) မင်းသားက မင်းသမီးကို “တစ်ယောက်ထဲစားရင် ကျောက်ကပ် ပျက်စီးတာ ပိုမြန်တယ်” ဆိုလား ပြောဖူးတယ်၊ ကျနော်ကတော့ အတွေးတွေကို ကျောက်ကပ်နဲ့ လဲပစ် လိုက်တယ်၊း)
ကြည့်စမ်း..၊ Great minds think alike ဆိုတဲ့စကား တယ်မှန်ပါလား...၊း)
အချိန်လုပြီး ကွန်မန့်ကို ရေးချင်သလို ရေးတယ် ဆိုတာတော့ ကြိုက်သွားပြီဗျို့...ဟားဟား၊
ပြင်သစ်တွေနဲ့ ဂျပန်တွေရဲ့ ရထားစီးဘဝတွေ ကတော့ အတူတူပဲ ဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာ...၊
မပျင်းတတ်ဘူးဆိုရင် ဘဝမှာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း နေရတာ လည်း ပျော်စရာပါပဲဗျာ...၊
ဟုတ်ကဲ့၊ အယောက်တိုင်းမှာတော့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ ဘဝနေနည်းတွေ ရှိမှာ သေချာပါတယ်..၊
အကြိုက်တွေကို ကြိုက်တဲ့အကြောင်း ဖတ်ရတာလည်း ကြိုက်ချင်စရာပါပဲ...၊း)
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ ကြိုက်တာ မရှိတာထက် စာရင်တော့ မကြိုက်တာ ရှိတာ ခံသာပါတယ်၊ အဲ.. မကြိုက်တာ မရှိဘူး ဆိုရင်တော့ နေရာတကာ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်ဖို့ သေချာသလောက်ပဲ...၊း)
ကွန်ပြူတာ အသုံးပြုချိန်ခြင်းတော့ တူနေပြီဗျို့...၊
နေဦးဗျ၊ “အရက်မဟုတ်ဘဲ ကော်ဖီနဲ့ မြည်းလို့ တော်ပါသေးရဲ့” လို့ အတွေးမစောနဲ့ဦး၊ ကော်ဖီက အိုင်းရစ်ရ်ှကော်ဖီဆို ဘယ့်နှယ့်လုပ်မလဲ...၊းD
ရှင်းလင်းတဲ့ ကွန်မန့်လေးကလည်း ကြိုက်ချင်စရာပါပဲ..၊
ဘဝမှာ တချိန်မဟုတ် တချိန်တော့ ကျနော်တို့အားလုံး စက်ရုပ်တွေ ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်ခဲ့ကြဖူးမယ်လို့ ထင်တာပဲ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မသိရင်သာ နေမယ်....၊း)
အေးအတူ ပူအမျှဆိုတာ ဒါပဲဖြစ်မယ်ဗျ၊ ဝလည်း အတူတူ ဝလာအောင်လေ....ဟားဟား။
ကိုညီလင်းရဲ့ တစ်နေ့တာ အကြိုက်လေးတွေကို စိတ်ဝင်တစား လာဖတ်သွားတယ်။ စာရေး ကောင်းတဲ့ သူဆိုတော့ ဘာလေး ရေးရေး နှစ်သက်ဖို့ ကောင်းတာပဲ။
ကျနော်ကတော့ နိူးစက်ကို ၂ ဆင့်ပေးပြီး
အိပ်တယ်၊ ပထမအဆင့် မြည်လာရင် ပိတ်ပြီး
ဆက် အိပ်တယ်၊ ဒုတိယအဆင့် ထပ်မြည်ရင်
ပိတ်ပြီး ငါးမိနစ်လောက် ခိုး အိပ်တယ် ... :P
အင်း... ရိုစ့်ကိုတော့ တခုခုကျွေးမှ ဖြစ်တော့မှာပါ...၊း)
အဲဒါလည်း ကောင်းမယ်ဗျ၊ ငှက်ဆိုးထိုးသလို အသံနဲ့ နှောင့်ယှက်တတ်တဲ့ နှိုးစက်တွေဟာ လူတွေ stress များရခြင်း အကြောင်းတခုလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်၊ အခုလို ၂ ဆင့်ခံ ဆိုတော့ ကြားခံနယ်က ကျယ်ပြန့်လို့ ငြိမ့်ငြိမ့်ညင်သာ နိုးလာလို့ ရတာပေါ့...။း)
Like at face book,just type like,like,like......Love to read one's daily like.Whatever you touch the subject,it sparkle cos of your writing skill.It's lovely.
ဘဝကို နေပျော်အောင် နေတတ်တယ်ဆိုတာလေး အကြိုက်ဆုံးပဲ...း))
အမလည်း ရေးနေတယ်... Daily Dislike ပေါ့...း))
*** ဓါတ်ပုံထောင့်မှာ နာမည်လေး ရေးထားပါတယ်... သူက ဘလော့ဂ်ကို သံယောဇဉ်ပြတ်လိုက်သမှ နာမည်တောင် ရေးချင်တာ မဟုတ်ဘူး... ကိုယ်ကသာ မနေနိုင်လို့ နာမည်လေး အတိုကောက် ရေးထားလိုက်ရတာ...း))
ကိုညီလင်းကို Flickr ထဲမှာ ရှာမရဘူးဗျ...
ကျေးဇူးပါဗျို့၊ ဂျီးဒေါ်ကိုတော့ marmite en chocolat ကျွေးမယ်...၊း)
ဟုတ်သားပဲဗျာ၊ နာမည် initial ပါတာကို ဒီမျက်လုံးက ဘယ်လိုလုပ်များ မတွေ့ဖြစ်သလဲ မသိဘူး၊ ရှန်းတာနဲ့ မှုန်တာ.. တခုခုပဲ၊း) Flickr အကောင့်ကို ကျနော် မသုံး တာကြာနေပြီဗျ၊ အဲဒီအကောင့်ကို ဒီဘလော့ဂ်မှာ ပုံတွေ တင်ဖို့ hosting အနေနဲ့ပဲ ဖွင့်ထားတာပါ၊ အဲဒီက ပုံတွေအားလုံး ကို ဒီဘလော့ဂ်ရဲ့ Photo ဆိုတဲ့ label အောက်မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်၊ Pro အကောင့်တစ်ခု ဖွင့်ဖို့ စဉ်းစားနေတယ်၊ ဖွင့်ဖြစ်ရင် ကျနော်ပြောမယ်လေ..။
ကျနော်လဲ အိမ်ပေါ်ရောက်လို့ ဖိနပ်နဲ့ ခြေအိပ်
အဲ့အချက်ကိုကြိုက်တယ်း) ။
အစ်ကို့စာတွေဖတ်ပြှီး ဓာတ်ပုံတွေငေး ပြီးတော့ မိသားစုဘ၀လေးကို အားကျရတာကြိုက်တယ်။
အဲဒါဆို ချက်ချင်းပဲ လွတ်လပ်သွားတယ်လို့ ခံစားရတယ်နော်....၊
ခင်မင်ဖွယ်ရာ ကောင်းတဲ့ ညီငယ်တစ်ယောက်က ပုံမှန် လာလာဖတ်နေတာလည်း နှစ်သက်စရာ ကောင်းတဲ့ အချက်တခုပါပဲဗျာ...။း)
အချက်တွေအားလုံး ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဖြစ်နေတာကို ကြိုက်တယ်..။
Simplicity is the best policy ဆိုလားပဲ ပြောကြတယ်လေ...။း)